Aha! Jokes, Satire » ~~ တစ်ခါက နှင့် ချစ်အာပုံ ~~	22
Posted by surmi on Oct 16, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Food, Drink & Recipes, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 22 comments
အာပုံ ဆိုတာ ဘယ်လူမျိုးရဲ့ အစားအစာတော့သေချာမသိ ။ မောင်ဆာမ်ိတို့ အရပ်မှာတော့ ကုလားမလေးတွေရောင်းကြသည် ဒယ်အိုးခွက်ခွက်ထဲကို မုန့်ရေများ လောင်းထည့်ပြီးလျှင် ဒယ်အိုးကို ဝေ့ဝိုက်၍ လှည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် အထက်ကပုံလို
ဖြေပြေခက်သည် ၊ တလျှက်မပြေ ၊ ရသာချွေခက် အိမ်မက်ထဲက ချစ်အာပုံ …… ။ .
အော် ……… အာပုံ …… အာပုံ …… ချစ်အာပုံ ……… * တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ၊ အဓိပ္ပါယ်လွဲလို့ ၊ ခွဲခဲ့ရပေ ၊ ဒို့တစ်တွေသည် ၊ တစ်ခါပြန်၍ ဆုံပါစေ …… ။
Alinsett @ Maung Thura says: အာပုံတော့ သိပ်မကြိုက်…
surmi says: အလက်ဆင်းက အာပုံသေခြာမစားဘူးသေးပုံရတယ်
Ma Ma says: အာပုံနဲ့ တိုရှည်ပြဿ နာ တက်ခဲ့ဖူးတယ်။
surmi says: တိုရှည် အသံထွက်နီးနီးစပ်စပ်က
padonmar says: .ရန်ကုန်က ဘယ်လိုခေါ်လို့လဲ။
surmi says: ရန်ကုန်ကလည်း အာပုံ လို့ဘဲခေါ်တာပါ အန်တီဒုံရယ် .……
အဲ့ဒါမြင်ပြီး အရင်ကအဖြစ်လေးတွေသတိယလာလို့ရေးလိုက်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: တခါမှ မစားဖူးဘူး ရယ် စားလို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲ မန်းလေးမှာ မရှိဘူးလားလို့
အမေ့ကိုတော့ မမေးကြည့်ရသေးဘူး အာပုံ ( Indian Snack ) ဆိုရင် ရပြီ မှန်ပြီမလားလို့
surmi says: အဲဒါ အဲဒါပြောတာလေ အခုတော့ သူတို့လုပ်မှ ဘာလိုလို ညာလိုလို
အဲ့သဟာကြောင့် အဲ့ဒီမုန့်မရောင်းကြတာလား မသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟိုးအရင်ကမန်းလေးမှာလည်းအာပုံရှိတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျနော်က မုန့် အာပုံ ကို မစားးဖူးးတာ..
kai says: လစ်ဘရယ်အကြောင်းလိုက်ရှာတာ.. အာပုံ.. အဲ..အဲ.. မိန်းမအခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးမြှင့်တဲ့စာတွေ့လို့…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပုံ ယူသွားဘီ တဂျီးး
ဦးကြောင်ကြီး says: .ခြစ်အာပုံ
Courage says: အာပုံ အား အသရေဖျက်မှုဖြင့် မြန်မာတိုင်းစ်ကို တရားစွဲသင့်ပါကြောင့် တောင်းဆိုပါသည်….. အဟိ
Shwe Ei says: -၀ယ်စားလို့ရမဲ့နေရာရှိရင် ပြေးဝယ်လိုက်ချင်တာ..
-ချိုချိုအီအီ အသံကြားတာနဲ့ သရေယိုနေဘီ :P
kai says: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. မြန်မာတိုင်းမ်လို.. နိုင်ငံခြားသားဖတ်တဲ့ သတင်းစာကလုပ်ချလိုက်ပြီဆိုတော့… နောက်ပိုင်းဝင်လာမယ့် တိုးရစ်တွေ.. စားဖို့မေးလိမ့်မယ်..။
ကောင်းတာပါပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: လှည်းတမ်းလမ်း၊ လှည်းတမ်းဈေးရှေ့.. ဆု ကော်ဖီဆိုင်ရှေ့နားမှာ ညနေဆို အာပုံရတယ်… အာပုံကြိုက်သူများ သွားစားဂျဘာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .အော်..ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ
.ဗိုလ်လိုပြန်လိုက်မှဂွမ်းသွားတော့တာကိုး Ar Pone အထိလောက်ရေးရင်ရပြီပဲကို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဆာဆာ အဲ့ ဗန်းစဂါး ကို နီ တစ်​ဂယ်​ မသိဘူး​ပေါ့ အံ့ဘဟယ်​ ဘယ်​နား သွားအိပ်​​ပျော်​​နေဘာလိမ့်​ ။ ခက်​တာက ဗမာ​တွေကလည်း ​တွေးလိုက်​ရင်​ အဲ့ဘက်​ချည့်​ပဲ ။ ခု​တောင်​လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​မှာ ” ​ပေါက်​စီ ဆမူဆာ အီကြာ​ကွေး ” ဤ သုံးမျိုး ခပ်​လှမ်းလှမ်းက​နေ ​အော်​မမှာရဲဘူး ။ အဲ့သုံးမျိုးကလည်း သူ့ သီးခြား အဓိပ္ပာယ်​ တစ်​မျိုးစီ ရှိကြ​တော့သည်​ တစ်​မုံ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: ထအာလူးဆနွင်းမကင်းရှာတာ…ဦးဆာရဲ့အာပုံနဲ့တိုး…… ကီလားစာတွေတော့မကြိုက်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ငခွစ်ကို ယီး….. ယီး….. ယီးဇားစာ ပေးမယ်….
E-မြောက်မြောက် says: ကျနော်လဲ စမူဆာ ရှာနေတာ အာပုံနဲ့ တဲ့တဲ့တိုးပါကရောလားဗျာ